Iva Neshamwari Kuti Usasurukirwa | Vari Kuyaruka
1. Isa pfungwa dzako pane zvaunogona kuita. (2 VaKorinde 11:6) Kunyange zvazvo zvakanaka kuti uzive zvausingagoni kuita, une zvakawanda zvaunogonawo kuita. Kuziva kuti unogona kuita chakati nechakati kuchakupa chivimbo chokuti usaramba uchizviona semunhu asingabatsiri uye uchakurira dambudziko rokusurukirwa. Zvibvunze kuti, ‘Ndezvipi zvandinogona kuita?’ Funga nezvematarenda auinawo kana unhu hwakanaka hwauinahwo.
2. Farira vamwe zvechokwadi. Tanga nokufarira munhu mumwe chete. Wechiduku anonzi Jorge anoti, “Kungobvunza vamwe kuti mamuka sei kana kuvabvunza kuti basa ravo riri sei kunokubatsira kuti uvazive zviri nani.”
Unogona kuita zvinhu zvinoita kuti uwirirane nevamwe vako
Zano: Usangotaura nevanhu vezera rako chete. Humwe ushamwari hwakanaka kwazvo hunotaurwa muBhaibheri hwaiva hwevanhu vemazera akasiyana zvikuru, vakadai saRute naNaomi, Dhavhidhi naJonatani, uye Timoti naPauro. (Rute 1:16, 17; 1 Samueri 18:1; 1 VaKorinde 4:17) Yeukawo kuti pakukurukurirana unofanirawo kupa vamwe mukana wokutaura. Vanhu vanofarira vanhu vanovateerera. Saka kana uchinyara, yeuka kuti hauzongorambi uri iwe unenge uchitaura!
3. ‘Nzwira vamwe ngoni.’ (1 Petro 3:8) Kunyange kana usingabvumirani nemafungiro evamwe, vateerere usingavadimburiri. Edza kutsvaka uye kutaura zvinhu zvamunobvumirana. Kana musingabvumirani pane imwe nyaya, zvitaure nounyoro uye nokungwarira.
Zano: Taura nevamwe nenzira yaunoda kuti vataurewo newe. Kupopotera vamwe, kuvatsvinyira uyewo kuvatuka kana kuti kuvaita kuti vanzwe sokuti nguva dzose havana kururama kunoita kuti vanhu vatambire kure newe. Vachakuda zvikuru kana ‘kutaura kwako kuine nyasha nguva dzose.’—VaKorose 4:6.
Kukunda Dambudziko Rokusurukirwa
Une dambudziko rokusurukirwa here? Shandisa pepa rino kuti uone kuti zvii zvinokonzera kuti usurukirwe uye kuti ungakurira sei dambudziko racho.